RASMI: Kooxda Barcelona oo mid ka mid ah xiddigaheeda ka iibisay koox ka dhisan horyaalka Premier League. – Gool FM
(Barcelona) 26 June 2019. Kooxda Barcelona ayaa xaqiijisay in xiddigeeda Andre Gomes ay si toos ah uga iibisay Everton, hal fasal ciyaareed uu xiddigaan si amaah ah uga soo muuqday kooxda ka ciyaarta Premier League, hadda wax walba waa la qurxiyay.
25-jirkaan ayaa kooxda Barcelona kaga yimid dhanka Valencia wuxuuna kooxda ku yimid adduun dhan 35 Malyan oo Yuuro iyo 20 Malyan oo yuuro (gunno ah) kuna sabsan sida uu kooxdiisa bandhigga uga muujiyo, balse niyad jab uu xiddigaan kala kulmay garoonka Camp Nou waxaa u badalay waqti qurux badan uu ka helay Goodison Park.
Balaugrana waxey xiddigaan hawada u marisay mahad celin, waxeyna u rajeysay inuu mustaqbalka guulo muhiim ah gaaro maadaama uu kooxdeeda si qurux adan uga tagay.
“FC Barcelona waxey jeclaan laheyd iney si la wada arki karo uga mahad celiso Andre Gomes joogteyntii iyo huriddii uu kooxda u sameeyay, waxaana u rajeyneynaa nasiib wanaagsan iyo guulo mustaqbal ah” ayaa lagu qoray bayaan kasoo baxay kooxda Balaugrana.
Xiddigaan intii uu ku sugnaa kooxda Balaugrana wuxuu saftay 78 kulan, isagoo kula guuleystay 4 koob.
Manchester United oo jawaab cad ka bixisay codsi kaga yimid kooxda Barcelona